Comedy uPawulu Figà "I Spy" - hhayi ekuqaleni, kodwa omunye inkulumo yokulingisa yimpumelelo kakhulu hlola amabhayisikobho. Isithombe elingangena ngokuphepha ukuziqhayisa kokufaneleka inhloso ngempela abaningi isenzo umshawushile, efana nobuciko bokusina kuya brilliant yabalingisi Ensemble. In the movie "The Spy," nabalingisi ngomklamo wokuqala njengoba omunye ubukhulu izinkanyezi lokuqala Hollywood. Futhi ama-movie, ukuba bangezwani kuphela ngenxa limenyezelwe Imali ehloniphekile, bona bakhangwa i umqondisi simo futhi ubuntu engavamile. Paul Fig ngale phrojekthi kubantu abathathu: umqondisi-umkhiqizi, umbhali kanye co-umkhiqizi. Ngokusho inani lezinkanyezi abathinteka umsebenzi wamakhiwani ingaphikisana ngokuthi mhlawumbe ifilimu "Spy Kids 3" (Cast: Sylvester stallone, Salma Hayek, Antonio Banderas Denni Treho, . Alan Cumming et al).
inselele Brash emphakathini
Paul Fig ayedume omunye Abadali ezimbalwa umkhakha ifilimu, okuvumela abesifazane kukhanye amahlaya. Ukukhiqizwa uyayilahla zonke izinhlobo izici zezombangazwe, izinhlelo ukuphikiswa ohulumeni, izinhlangano amaphekula - konke okungenhla uyawasebenzisa nethimba iwubala kuphrojekthi "Spy". Abalingisi kanye izindima ifilimu ifaniswe nomunye ngokuphelele, futhi naphezu kweqiniso lokuthi iphosta kuhlobisa handsome Dzheyson Steytem futhi Dzhud Lou, zafeza ezimibalabala, kodwa izinhlamvu yesibili. Phambili kulesi sithombe kunesonto, umlobi ozithandayo Melissa Makkarti - actress, ogama invoyisi okungenani uhambelana ezivamile hlola isithombe. Mhlawumbe ahlekisayo, ucabangela lokhu, baye baba "Alias" hhayi "hlola". Abahilelekile kule umsebenzi wokwakha, waveza ukuthi umqondisi uPawulu Fig waphinda waphonsa inselele abadelelayo emphakathini lapho ephatha abesifazane njengoba esilayidi egcwele. Kulokhu, umqondisi masterfully lampooned canons hlola amabhayisikobho, lapho kukhanye-alpha kwabesilisa ongaphambili.
Comedy "I Spy", nabalingisi indima umbukeli qiniseka zikhunjulwe, has a indaba ethakazelisayo. Ukulandisa iqala neqiniso ukuthi super-ejenti-Fain handsome Bradley (Dzhud Lou), ngesikhathi umsebenzi ukubhubhisa villain main futhi njengalokhu sekufeni kwakhe, futhi isikhwama esincane athandwayo nge sezikhali zenuzi ezandleni indodakazi isitha wahlulwa Rayny Boyanovoy (Rouz Birn). Enye i-ejenti Rick Ford (Dzheyson Steytem) akakwazi ukubhekana umsebenzi ngenxa isimo esingokomzwelo engazinzile. Khona-ke ejwayele ngokuyinhloko kube ziyasibona CIA umsebenzi Syuzan Kuper (Melissa Makkarti) uthola ithuba ukuba ngempela ukulwa ejenti futhi awuqede mission kuhlulekile. "Spy" Lokhu kunokwaziswa okufingqiwe emfushane movie. Sakaza ngokufeza izinhlamvu emaphakathi izindima okukhulunywa umoya omuhle wanqoba ngesikhathi indawo ngesikhathi senqubo sokudubula. Ngenhlanhla, lonke yabalingisi Ensemble we ifilimu wavelelwa enviable amahlaya self-Ukwehlisa futhi ngokwanele ukuzethemba.
Ensemble yabalingisi izithombe
Umlingiswa oyinhloko webhayisikobho ifilimu Syuzan Kuper komculo esikrinini ingenye ethandwa kakhulu abadlali amahlaya ku Hollywood Melissa Makkarti. muva Ucabangelé isihluthulelo impumelelo yanoma ifilimu lapho kudlala. Lo mlingisi akesabi ukwenza nanoma yimuphi enhle Sandra Bullock, noma nge Bill Murray. McCarthy uyazi ukuthi izintokazi ukubukela ibhayisikobho ethile nge iqhaza lakhe, inkinga Heroine sayo kuyoba eduze futhi kusobala kakhulu nalezo Divas imodeli ukukhathazeka Dreamland nge ukubukeka futhi ukuthungwa Barbie unodoli. Abadlali of the ifilimu "I Spy" bakhangwa omuhle wakhe, bomsebenzi kanye nomusa. Yonke iqembu lapho kwamhlaba umxhwele isithombe kanjani McCarthy ngomfanekiso Syuzan Kuper ababeyizazi ne Bond ephelele (uhlamvu Lowe) futhi iqhawe Jason Steytema. Lesi sakamuva, ngenhlanhla wabonisa ithalenta brilliant yamahlaya.
Pop izinkanyezi movie
Ngaphezu kwalezi izinkanyezi ku-movie abakhona Rouz Birn njengoba antagonistki, Ellison Dzhenni njengenhloko yomkhaya CIA futhi Miranda Hart, ngezikhathi ancintisane Cooper e ikhono singene ezimweni aluhlaza cwe. Futhi uhlamvu ezithakazelisayo eyadlalwa rapper 50 Cent in the comedy "I Spy". Abalingisi iphupho ifektri bashaqeka ukubonakala ngo isimo Verka yethu Serduchka, enza Ukudansa unsinkable Lasha Tumbai. Abagxeki abaningi yasekhaya nazibona ukuvela Andrew Danilko kufihlwe ibhekisela yezakhiwo yokuthi indlela efakazelwe ngoba amadoda ukuba basinde kule show ibhizinisi - ukwenza sengathi owesifazane.
Fighters Russian nefilosofi yabo
Etintfweni - lawa ezinquma ukuthi ukuziphatha
Kuyini rye ufulawa ehlutshiwe? zokupheka